हाम्रो बारेमा — donnews.com
‘नागरिकका लागि निर्भीक पत्रकारिता’ भन्ने मूल नाराका साथ डन न्यूज पब्लिकेसन प्रा.लि.बाट सञ्चालित डन न्यूज डटकम (www.donnews.com) नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता (द.नं. २०४७/०७७/०७८) र प्रेस काउन्सिल नेपाल सञ्चारग्राम तिलगङ्गा काठमाडौंमा (द.नं. ३१२/०७७/०७८) सूचीकरण भई सञ्चालित छ ।
सीमान्तकृतका आवाज र मुद्दालाई मूलधारमा ल्याई सुशासनयुक्त समाज र पारदर्शी शासन व्यवस्थाको अनुभूति नागरिकस्तरसम्म पु¥याउनु यसको लक्ष्य रहेको छ । २०६८ फागुन १ गतेबाट सञ्चालित ‘डन न्यूज दैनिक’लाई हामीले अनलाईन मार्फत् निरन्तरता दिएका हौं । पोखरामा ‘खोजी पत्रकारिता’ र ‘चूनौंतीपूर्ण पत्रकारिता’मा डन न्यूजले आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाएको छ । पत्रकारिताको जगतमा डन न्यूज नयाँ आयाम बोकेर अगाडि बढ्दैछ । विशेष गरी गण्डकी प्रदेशलाई केन्द्रमा राख्दै पोखराबाट ‘डन न्यूज डटकम’ (www.donnews.com) सञ्चालनमा आएको छ ।